VIKELA UKUBHEBHETHEKA KWE TB, UMARCH INYANGA YOKUQWASHISANA NGE TB | News24
VIKELA UKUBHEBHETHEKA KWE TB, UMARCH INYANGA YOKUQWASHISANA NGE TB
I-TB iyisifo esibangelwa igciwane elinukubeza amaphaphu elibizwa ngokuthi iMycobacterium Tuberculosis. Leli gciwane lisatshalaliswa umoya uma umuntu osenalo emaphashini ake ekhwehlela engawuvali umlomo noma ethimula engawuvali umlomo namakhala.leligciwane liyatholakala nokwezinye izindawo emzimbeni njengasesiswini nasemgogodleni njalonjalo kodwa- ke lijwayeleke kakhulu emaphashini.
Uma usulihogelile leligciwane emoyeni ngesikhathi uphefumula ungangabanakho ukugula uthole ukuthi linqobekile ngenxa yamasosha omzimba esasimweni esiphile kahle. Uma usihogela kanti amasosha omzimba athanda ukuntegantenga lizobe selikugulisa leligciwane usuba neTuberculosis. Izimpawu esibonakala ngaso isifo lesi ukukhwehlela isikhathi esingaphezu kwamasonto amabili noma ukukhwehlela igazi, izinhlungu esifubeni, ungalambi, ukukhathala, ukujuluka ebusuku noma imfiva, ukuncipha okungahlelelwe.
Hamba uyohlola mahhala emtholampilo oseduza nawe uma kukhona okuzwayo emzimbeni wakho kulokhu osekubaliwe.kubaluleke kakhulu ukuba uyohlola ngoba uma ungenzi njalo uyosabalalisa igciwane kwabanye abantu bese beba baningi abantu abahaqwa yilesifo futhi uma ingalashwa i-TB iholela ekufeni. Kubalulekile ukuthi uma usuhlolile ulandelele imiphumela khona uzobe usuqala ukudla amaphilisi uma utholakale une TB.
Thatha imithi yakho ngendlela oyiyalelwe umsebenzi wezempilo. Uma unamaphilisi amaningi, wathathe ngesikhathi esisodwa. Qikelela ukuthi ubuyela emtholampilo ngelanga eyalwe ukuthi ubuyela ngalo umsebenzi wezempilo ukuze amaphilisi akho engezokuphelela. Kubalulekile ukuthatha amaphilisi akho noma usuzizwa uphilile kuze kuphele isikhathi osibekelwe emtholampilo. Isibalo samaphilisi sihambelana nesisindo somzimba wakho futhi ubude besikhathi sokuwadla kuya nokuthi iyiphi inhlobo yeTB etholakale kuwe ngakho ungazifanisi nabanye.
Uma uyeka ukudla imithi ungakayalelwa umsebenzi wezempilo ungabuye uthole i-TB futhi. Kungenzeka ibuye isinamaphilisi engasazweli kuwo phecelezi Multi Drug Resistant TB (MDR). Lenhlobo futhi ungayithola uqala nje ukuba neTB uma uthelelwe umuntu osenayo vele ngakho kubalulekile ukuzivikela.
Kubalulekile ukuhlolelela IHIV uma ungazazi ukuthi unjani ngoba i-TB iwusomathuba khona uzothola ukwelashwa ngendlela ekulungele. Kuyenzeka zihambisane lezizifo futhi kuyenzeka kuhambe ngakodwa. Uma kuhamba kokubili uzobe usuqala udla amaphilisi eTB amasonto amabili kubonakale ebese uqala nawe HIV ngokohlelo lakhona. Uma ususemtholampilo kubalulekile futhi ukuhlolela nezinye izifo ezingamahlala-khona ezihlolwa mahhala.
Iyavikeleka i-TB ngokuthi abantu asebetholakale benayo bawadle bawaqede amaphilisi abo, ukuvala umlomo namakhala nge tissue paper uma ukhwehlela noma uthimula, ukugeza izandla ngamanzi anensipho, ukugoma abantwana abazelwe, ukudla ukudla okunempilo, ukungabhemi ugwayi nokungaphuzi utshwala, ukuzivocavoca nokuvula amafasitela endlini njalo ekuseni.
Sifisa ukwazisa umphakathi ukuthi ngomhlaka 21 March 2017 endaweni yaseMjintini kuzobe kubungazwa ukusuku lweTB njengoba inyanga kaMarch 2017 yaziwa njengenyanga yeTB. Lapho umphakathi uzobe uqwashiswa kabanzi ngesifo seTB. Umphakathi uyamenywa ukuba uphume ngobuningi bawo beze e Hholo lomphakathi eMjintini ngo 09H00 ekuseni.
Ulwazi olwengeziwe xhumana no Sr. N Ntuli on 033 413 9400 / 082 856 0028 okanye uxhumane no Mbali Ntshingila umxhumanisi wesibhedlela i-Greytown kanye nomphakathi (Public Relations Officer) ku-033 413 9400 / 071 055 2820 email: sethabile.ntshingila@kznhealth.gov.za - Greytown Hospital management.